कति जनालाई कसरी भोट हाल्ने? (भिडियो) | Nagarik News - Nepal Republic Media
काठमाडौं— मुलुक संघीय प्रणालीमा गएपछि हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति नजिक आइरहेको छ। मंसिर १० र २१ गते हुने आम निर्वाचनपछि मुलुक पूर्ण व्यवहारिक रुपमै संघीय ढाँचामा जाँदैछ। यो निर्वाचनमा कसरी मतदान गर्ने त?
यो पटकको निर्वाचनबाट मतदाताले संघीय प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा सदस्य छान्न भोट खसाल्नु पर्ने हुन्छ। मतदाताले बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यका लागि मतदान गर्नुपर्छ। बहुमतीय प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यलाई मतदान गर्न छुट्टा छुट्टै रंगका दुई मतपत्र हुनेछन्।
यसैगरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि दलहरुको चुनाब चिन्हमा मतदान गर्नुपर्नेछ। रातो रंगको यो मतपत्र प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि एउटै हुनेछ।
मत खसाल्ने बेलामा मतदाताले सबैभन्दा पहिले हरियो रंगको मतपत्र पाउनेछन्। हरियो मतपत्र पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा सदस्य चयनका लागि हो। मतपत्रमा भएमध्ये कुनै एउटा निर्वाचन चिन्हमा मात्र मतदाताले स्वस्तिक चिन्ह लगाउनु पर्नेछ।
निर्वाचन अधिकृतले दोस्रो मतपत्र कालो रंगको दिनेछन्। यो मतपत्र बहुमतीय प्रणालीबाट प्रदेश सभा सदस्य चयन गर्नका लागि हुनेछ। यो मतपत्रमा भएका भएमध्ये एउटा निर्वाचन चिन्हमा मात्र मतदाताले स्वस्तिक चिन्ह लगाउनु पर्नेछ।
अन्तिममा मतदाता रातो रंगको मतपत्र पाउनेछन्। यो मतपत्र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा समानुपातिक प्रणाली निर्वाचित हुनेहरुका लागि हो। यसमा राजनीतिक दलको एउटा मात्र चुनाब चिन्हमा स्वस्तिक चिन्ह लगाउनु पर्नेछ।
मतदान कसरी गर्ने? भिडियो हेर्नुहोस्
प्रकाशित: १ मंसिर २०७४ १५:३६ शुक्रबार
#चुनाब #मतदाताशिक्षा #प्रतिनिधिसभा #प्रदेशसभा